Ogaden News Agency (ONA) – Warbixin: Maalintii 4aad Shirweynaha OYSU Qaarada Europe
Warbixin: Maalintii 4aad Shirweynaha OYSU Qaarada Europe
Shir sanadeedkii OYSU qaarada yurub oo galay maalintiisii 4aad, ayaa sidii caadada ahayd wuxuu bilowday saaka abaarihii 9:00 subaxnimo maadaama sidaas lagu balansanaa, aayadaha qur’aanka kariimka oo hadiya jeer shirka lagu furo kadib wuxuu ku bilowday seminaar ku saabsan xuquuqul insaanka oo uu soo jeediyey Afhayeenka OYSU qaarada Europé ahna xogyaha OYSU Sweden mudane Amin Barkhadle.
HADAFKA IYO YOOLKA OYSU
Xoghayaha guud ee OYSU mudane Mujaahid Sh. Ibraahin Cabdalle ayaa si cilmeyeysan usoo jeediyey Seminaar ku saabsan hadafka iyo yoolka Midowga dhalinyarada iyo ardayda soomaalida Ogadeniya iyo waxyaabuhuu ururku hiigsanayo ama yoolkiisu yahay, sidookale waxuu dhalinyarada fahansiiyay waxyaabaha aasaaska u ah ururka iyo mabaa’diidiisa.
Intaas kadib Xoghayaha Guud waxaa kale oo uu soo jeediyay Siminaar kale oo la xidhiidha Taariikhda Ogadeniya iyo Kheyraadka uu dalku leeyahay.
Seminaarkaas oo ay dhalinyaradu aad u xiiseynayeen ayuu xoghayuhu si heersare ah uga xaqab tiray.
Siminaradaas kadib waxaa loo baxay Qado iyo xooga nasasho ah waxaana dib markale loo furay shirkii waxaana codbaahiyaha lagu soo dhoweeyey mudane Xasan Nuur oo ka hadlay abaabulka iyo kor u qaadida tayada dhalinyarada.
Waxaana siminaarkan loogasii munashaqooday dood cilmiyeed dhalinyaradu kadoodeen qaabka loo abaabuli karo bulshada. halkaas oo lagasoo saaray qodobo horumarineed oo mustaqbalka kor u qaadi doona wacyiga bulshada.
Dr Farxaan oo kamid ah aqoonyahanniinta da`da yar ee OYSU ayaa isna ka hadlay Cafimaadka iyo ahmiyadisa.
Dr. farxaan wuxu aad ugu dheeraaday sida loogu baahanyahay dhakhaatiir aqoontooda uga faa´iideeya dadkoodii. Waxa kale uu kawarbixiyey dhacdooyin uu goobjoog ka ahaa oo dalkii ka dhacay waxaanna ka mid ahaa hadaladiisii in xasuuqa ka socda dalkii uu noocya badanyahay uunna yahay isir goyn.
Wuxuu sheegay mudanuhu inuu ka ahaa goobjoog booyad gumeysigu leeyahay oo magaalada biyo u dhaamin jirtay biyahaasuna ay sumaysnaayeen
Meesha kama maqnayn madadaalo dhextaalo ah
Dhalinyarada Oysu finland ayaa soo bandhigay bandhig ka hadlaya marxalada dalkeenna iyo dadkeenu ku suganyihiin bandhigaas oo ay aad uga maqsuudeen daawadayaashii OYSU iyo martidii kaleba.
Shirka oo beri soo xidhmi doona ayaa lagu sheegi doonaa go´aamaadii iyo baaqii kasoo baxay hadii eebbe idmo
Kalasoo wakaalada wararka ONA
Ilwad ali/ Cabdiraxmaan jarari